कसरी तपाईंको ग्यारेन्टी गर्ने ईमेलको लागि कालोसूचीमा छ Martech Zone
कसरी तपाईंको ग्यारेन्टी गर्ने ईमेलको लागि कालोसूचीमा छ
मंगलवार, फेब्रुअरी 19, 2008 शुक्रबार, डिसेम्बर 12, 2014 Douglas Karr
हामी आज हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरू पूर्वावलोकन गर्दैछौं। तिनीहरू छिट्टै हाम्रो ईमेल एकीकरणमा सर्दैछन् - जुन राम्रो कुरा हो। म अनुमान लगाउँदै छु कि उनीहरूको वेबसाइटहरू सायद पहिले नै कालोसूचीमा छन् ... यहाँ किन छ…
तिनीहरूको वेबसाइटमा उनीहरूसँग एक सम्पर्क फारम छ। यो पर्याप्त राम्रो छ, फिल्डहरूको समूह उनीहरूको ईमेल पहलको लागि साइन अप गर्न तपाईंको सबै व्यक्तिगत जानकारी तिनीहरूलाई पठाउन। एक नजिकबाट हेर्नुहोस्, यद्यपि, र यो वास्तवमै सरल उपकरण हो जुन तिनीहरूले स्प्यामरहरूको फाइदा लिनको लागि बाहिर राखेका छन्।
<INPUT type=hidden value="yet@someone.com"name =" sendto "/>
लुकेका फिल्डहरूमा ध्यान दिनुहोस् जहाँ तपाईं ईमेल ठेगाना इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ! परिक्षणको रूपमा, मैले फाराम तानेँ, मेरो ईमेल ठेगाना यसमा राखें, र अर्को लुकेका फिल्डमा लिंक राखें। मैले सबमिट क्लिक गरें र एक मिनेट पछि, मसँग मेरो इनबक्समा स्पाम ईमेल थियो!
यो कसरी स्प्यामरले ब्लक हुने बारे चिन्ता नगरिकन ईमेल पठाउन जारी राख्न सक्दछ। तिनीहरूलाई केवल गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दछ यस प्रकारको फारम तपाईको वेबसाइट र तिनीहरू एक प्रक्रिया स्क्रिप्ट गर्न सक्दछन् जुन रातभरि लाखौं ईमेलहरू धकेल्छ। को ब्लक हुन्छ? स्प्यामर होइन ... कम्पनीले गर्छ!
यो विशिष्ट फारमaको वेबसाइटमा छ अरब डलर व्यापार, सानो व्यापार होईन। र त्यहाँ हजारौं यस्ता प्रकारका असुरक्षित फारमहरू छन् जुनसुकै नेटमा। विडम्बनाको कुरा यो हो कि उनीहरूले यो एएसपी पृष्ठमा गरे - एउटा पृष्ठ जुन सजिलैसँग सर्भरमा ईमेल ठेगानाहरूको लागि हेर्न सकिन्थ्यो र तिनीहरूलाई जोड्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले सोचिरहनु भएको छ भने, अवश्य नै हामीले उनीहरूलाई भनेका छौं!
टैग: ईमेल कालोसूचीईमेल फारमईमेल फार्म कमजोरतास्पाम फारम
अर्को बटन कहाँ छ?
व्यक्तिगत रूपमा, म कसैको बारेमा शंकास्पद छु कि तिनीहरूको ब्लगमा सूचीबद्ध इमेल ठेगाना र केवल एक सम्पर्क फारम छैन, तर यस्तो देखिन्छ कि यो गर्ने मात्र 100% तरिका हो। मलाई छवि इमेल ठेगानाहरू पनि मनपर्छ जुन मानिसहरूले देख्न सक्छन् तर टाइप गर्नुपर्छ। सायद एम्बेडेड फ्ल्यास अर्को मार्ग हुनेछ। तपाईं एक सम्पर्क फारम मात्र केटा हुनुहुन्छ?
"सूचीबद्ध इमेल ठेगाना नभएको कसैको बारेमा शंकास्पद"… ओउच! यदि मसँग मेरो ब्लगमा मेरो इमेल ठेगाना थियो भने, जाभास्क्रिप्ट ओब्फस्केटरको साथमा पनि, म एक दिनमा हजारौं स्प्याम प्राप्त गर्नेछु।
शंका नगर्नुहोस् - हामी केवल आफ्नो सुरक्षा गर्न कोशिस गर्दैछौं। IS का लागि सम्पर्कको उद्देश्य ताकि मानिसहरूले हामीलाई स्प्यामबोटहरूको लागि खुला नछोडिकन हामीसँग सम्पर्कमा रहन सकून्।
@ Stephen तपाईं सहि हुनुहुन्छ कि स्प्याम बटहरू लेख्ने धेरै प्रोग्रामरहरू अल्छी छन्। मेरो मतलब, तपाईं केवल को नतिजाहरू पार्स गर्न सक्नुहुन्छ http://tinyurl.com/yuje9z र स्प्याम गर्न सयौं हजार ठेगानाहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
तर जाभास्क्रिप्टमा लुकेका इमेल ठेगानाहरू, छविहरू र फ्ल्यास पनि सुरक्षित छैनन्। हेर्नुहोस् http://www.cryptologie.com/SpamFull.pdf केही वर्ष पहिले अध्ययनको लागि। "तिनीहरू मध्ये केही ASCII सुरक्षा र आधारभूत जाभास्क्रिप्ट वा फ्ल्यास कोड पनि समाधान गर्छन्।"
सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा अझै पनि इमेल ठेगानाहरू प्रकाशित गर्न रोक्न, र प्रयोग गर्न हो वेब फारम सट्टा।
म बुझ्छु तपाई दुबैले के भन्नुहुन्छ। मेरो लागि, एक सम्पर्क फारम एक व्यापार कार्ड मा मोबाइल नम्बर को सट्टा 1-800 नम्बर जस्तै लाग्छ। यसले धेरै कर्पोरेट / समर्थन टिकट महसुस गर्दछ।
मैले मेरो श्रीमतीको इमेलमा स्प्याम देखा परेको देखेको छु जुन मैले जाभास्क्रिप्ट अस्पष्ट गर्छु http://www.rachelsteely.com, तर ती साइटहरू एक महिना मात्र माथि छन्। म एक साथीलाई तिनीहरूको इमेल ठेगाना जंगलमा बाहिर राख्नु भनेर कहिले पनि भन्दिन यदि उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू के गर्दैछन्। यदि मसँग मेरो एन्टी-स्प्याम सफ्टवेयरको रूपमा गुगल नभएको भए, मैले सायद धेरै पहिले नै त्याग्ने थिएँ।
मलाई विश्वास छ पीडीएफहरू सादा पाठ हो (कम्तिमा गुगलले त्यसलाई स्पाइडर लिन सक्छ) र तपाईंको ईमेल तपाईंको रिजुमे, डगमा छ।
अप्रिल 12, 2008 मा 3: 29 एएम
मैले तपाईंको ब्लग पोष्ट धेरै रोचक पाएँ, तर यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझिन।
यदि तपाईंले यो फारम भर्नुभयो भने, स्प्याम बटहरूले तपाईंको इमेल ठेगाना कसरी प्राप्त गर्छन्?
यदि साइटमा तपाईको इमेल ठेगानासँग सबै समय लुकेका क्षेत्रहरू छन् भने, त्यसपछि स्प्याम बटहरूले तिनीहरूलाई कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने स्पष्ट छ।
तर जब तपाइँ यसलाई भर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ भर्खर सबमिट थिच्नुहुन्न, र त्यसपछि लुकेका क्षेत्रहरू टाढा जान्छन्, हैन? के स्प्याम बटमा त्यो पृष्ठमा सेट गरिएको प्रोग्राम छ जसले तपाइँले प्रयोग गरिरहँदा तपाइँले के टाइप गर्नुहुन्छ वा साइटले लुकेका फिल्डहरूमा के राख्छ?
मैले बुझिन। के तपाईं यसलाई थप व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?
र के गर्न सकिन्छ? स्प्याम बटहरूले पनि यो गर्न नसक्ने फारम कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? के यो केवल इमेल ठेगानाहरूको लागि लुकेका क्षेत्रहरू प्रयोग नगर्ने कुरा हो वा यो भन्दा बढि हो?
अप्रिल 12, 2008 मा 10: 49 एएम
आगन्तुकको रूपमा, तपाईं कुनै खतरामा हुनुहुन्न। समस्या यो फारम राख्ने मानिसहरूको लागि हो। स्प्यामरले फारम 'हाइज्याक' गर्न र यसलाई प्रयोग गरेर स्प्याम पठाउन सक्षम हुन्छ। यो एक भयानक अभ्यास हो कि कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा तैनात गरेको छ।
अप्रिल 12, 2008 मा 3: 32 एएम
एउटा अर्को प्रश्न….यदि मैले मेरो इमेल ठेगानालाई पृष्ठमा राख्नै पर्छ भने, त्यसो गर्ने उत्तम तरिका के हो? के हेक्सिडेसिमल क्यारेक्टर कोडहरू प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
अप्रिल 12, 2008 मा 10: 50 एएम
स्प्यामरहरूसँग धेरै जटिल क्रलिङ मेकानिजमहरू छन् जुन इमेल ठेगानाहरू धेरै तरिकाहरूमा फसल गर्न सक्षम छन्। म इमान्दारीपूर्वक मेरो इमेल ठेगाना वेब पृष्ठमा राख्दा थकित हुनेछु र यसको सट्टामा, सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नेछु।